MAK 7 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAK 7)
Otu ụbọchị, ndị Farisii na ụfọdụ ndị ozizi iwu sitere Jerusalem bịa ịhụ Jisọs.
Mgbe ha gbara ya gburugburu, ha hụrụ ụfọdụ nꞌime ndị na-eso ụzọ Jisọs ka ha ji aka na-adịghị ọcha na-eri nri. Ha akwọghị aka tupuu ha erie ihe, dị ka omenala ndị Juu sịrị dị.
Ọ bụ omenala ndị Juu, nke ka nke ndị Farisii, na tupuu mmadụ erie ihe, ọ ga-ebu ụzọ kwọọ aka ya. Omenala a bidororị nꞌoge dị anya.
Ọ bụrụ na ndị Juu esite nꞌahịa lọta, ha agaghị eri ihe ọ bụla tutuu ha akwọọ aka ha. Ọ dịkwa omenala ọzọ dị iche iche ha nwere dị ka omenala ịsacha iko, ma ọ bụ ịsacha ite na efere.
Nꞌihi na ndị na-eso ụzọ Jisọs edebeghị omenala ndị Juu a, ndị Farisii jụrụ Jisọs ajụjụ sị, “Gịnị mere ndị na-eso ụzọ gị adịghị edebe omenala ndị okenye anyị? Gịnị mere ha jiri were aka rụrụ arụ na-eri nri?”
Unu atụfuola iwu Chineke ma jidesiekwa omenala unu ike.”
Mgbe ahụ Jisọs gwakwara ha okwu sị, “Ihe unu na-eme bụ iwezụga iwu Chineke ka unu were omenala unu dochie nꞌọnọdụ ya.
Dị ka ịma atụ, Mosisi nyere unu iwu sị, ‘Sọpụrụnụ nne na nna unu, onye ọ bụla kwujọrọ nne ya na nna ya ga-anwụ.’
Ma unu na-ewezụga iwu Chineke a mgbe unu na-ezi ndị mmadụ sị, Ọ̀ bụ ihe ziri ezi ka mmadụ ọ bụla gwa nne ya na nna ya mkpa na-akpa sị, ‘Lee, ego nile m nwere ugbu a bụ nke Chineke. Enweghị m ihe ọ bụla m ga-enye unu.’
Nꞌụzọ dị otu a unu na-akwagide ndị mmadụ ka ha hapụ inyere nne na nna ha aka nꞌọnọdụ mkpa ha.
Nꞌụzọ dị otu a kwa, unu na-ewezụga iwu Chineke were omenala unu dochie nꞌọnọdụ ya. Ọ dịkwa ọtụtụ ụzọ ọzọ unu si ewezụga iwu Chineke ma na-ewerekwa omenala unu dochie nꞌọnọdụ ya.”
Mgbe ahụ Jisọs kpọrọ ndị nọ nꞌebe ahụ ka ha bịa ya nso. Mgbe ha bịara, ọ gwara ha okwu sị, “Geenụ ntị, unu nile! Ghọtakwanụ ihe m ga-ekwuru unu ugbu a.
Emesịa, Jisọs hapụrụ ndị mmadụ ahụ banye nꞌime otu ụlọ. Nꞌebe ahụ ndị na-eso ụzọ ya rịọrọ ya ka ọ kọwaara ha ihe okwu ahụ o kwuru pụtara.
Jisọs jụrụ ha sị, “Unu na-akọwa na unu aghọtaghị okwu ahụ? Ọ̀ bụ na unu aghọtaghị na ihe ọ bụla unu riri apụghị ịmerụ unu?
Ọ gwara ha sị, “Ọ bụ ihe sitere nꞌime mmadụ pụta na-emerụ ya. Ya bụ, echiche mmadụ na ọchịchọ ya.
na ịchị ịdọtara onwe gị ihe ndị ọzọ nwere, na ekworo, na aghụghọ nile, na adịghị ọcha nile, na inwe anya ụfụ nꞌebe ndị ọzọ nọ, na nkwulu nile, na nganga, ya na enweghị uche ọ bụla.
Ihe ọjọọ ndị a nile na-esite nꞌime mmadụ pụta. Ha bụkwa ihe na-emerụ mmadụ.”
Jisọs hapụrụ ebe ahụ gaa akụkụ obodo Taịa. Nꞌebe ahụ ọ banyere nꞌime otu ụlọ. Ọ chọkwaghị ka ndị mmadụ mata na ọ nọ nꞌebe ahụ. Ma o nweghị ike zoo onwe ya. Ọtụtụ mmadụ chọpụtara ya, kọsaa akụkọ na ọ nọ nꞌebe ahụ.
Ọ dịghị anya otu nwanyị bịakwutere ya. Nwanyị a nwere otu nwa nwanyị ntakịrị onye mmụọ ọjọọ na-esogbu. Ọ nụla akụkọ banyere ọrụ Jisọs na-arụ, ya mere, ọ bịakwutere ya daa nꞌala nꞌụkwụ ya.
Ọ rịọrọ Jisọs ka ọ chụpụrụ ya mmụọ ọjọọ bị nꞌime nwa ya nwanyị. (Nwanyị a bụ onye obodo Siria Fonisia. Ọ bụkwa onye mba ọzọ e ledara anya.)
Jisọs sịrị ya, “Mkpa m ugbu a bụ inyere ndị m, bụ ndị Juu aka. O zighị ezi iwere nri e debeere ụmụaka tụpụrụ nkịta ka o rie ya.”
Nwanyị ahụ zara sị, “Nke a bụ eziokwu Onyenwe m. Ma ụmụ nkịta na-erikwa ibiribe nri ụmụntakiri si na tebulu tụpụ nꞌala.”
Jisọs zara sị ya, “Nwanyị, ị zara nke ọma. Nꞌihi ọsịsa gị, ahụ adịla nwa gị nwanyị mma ugbu a. Laa nꞌụlọ gị.”
Nwanyị ahụ laghachiri nꞌụlọ ya. Mgbe o ruru ọ hụrụ nwa ya nwanyị ahụ ka o dina nꞌelu ihe ndina. Mmụọ ọjọọ ahụ esitekwala nꞌebe ọ nọ pụọ.
Emesịa, Jisọs sitere na Taịa lọghachi Saịdọn, sitekwa nꞌebe ahụ gabiga mpaghara Dekapolis jeruo nꞌosimiri Galili.
Nꞌebe ahụ ka ọ nọ mgbe e kuteere ya otu nwoke ntị chiri, onye na-asụkwa nsụ. Ndị kutere ya rịọrọ Jisọs ka o bikwasị ya aka, gwọọ ya.
Jisọs duuru nwoke ahụ pụọ nꞌebe igwe mmadụ ahụ nọ, ebe ha abụọ nọpụrụ iche. Nꞌebe ahụ Jisọs rụnyere nwoke ahụ mkpịsị aka nꞌime ntị ya abụọ. Jisọs gbụpụkwara ọnụ mmiri, metụkwa nwoke ahụ aka nꞌire.
Mgbe ọ na-eme ihe ndị a o leliri anya nꞌeluigwe sụọ ude nꞌime onwe ya gwa nwoke ahụ okwu sị ya, “Ef fata,” nke pụtara “Meghee!”
Ngwangwa, ntị nwoke ahụ meghere. Ọ kwụsịkwara ịsụ nsụ, bido na-ekwu okwu nke ọma.
Emesịa, Jisọs nyere ndị ahụ iwu sị ha agwakwala onye ọ bụla ihe gbasara ọrụ ịrịba ama ọ rụrụ. Ma iwu dị otu a egbochighị ha, nꞌihi na ha gara kọsaa akụkọ ọrụ ịrịba ama nile ọ rụrụ.
Nke ka nke, ọrụ ịrịba ama Jisọs rụrụ jubigara ha anya oke, mee ka ha kwuo sị, “Ihe nile ọ na-eme mara mma. Ọ na-eme ka ọ bụladị ndị ntị chiri nụ ihe, na-emekwa ka ndị ogbi kwuo okwu.”